Tag: sheekada macaamiisha | Martech Zone
Tag: sheekada macaamiisha
Dhisida Sheeko-Sheeko: 7da Rajo waxay kaa rajeyneysaa ganacsigaagu inuu ku tiirsan yahay
Sabtida, Juun 21, 2018 Sabtida, Juun 21, 2018 Douglas Karr
Qiyaastii bil ka hor, waxaan helay inaan kaqeyb galo kulanka fikirka suuq geynta macmiilka. Waxay ahayd mid fantastik ah, la shaqeynta latalin caan ku ah horumarinta khariidadaha waddooyinka ee shirkadaha tikniyoolajiyadda sare. Maaddaama khariidadaha la horumarinayo, waxaan la dhacay waddooyinka gaarka ah iyo kuwa lagu kala duwan yahay ee kooxdu la timid. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale go'aansaday inaan sii wado kooxda inay diirada saarto suuqa bartilmaameedka. Hal-abuurnimadu waa istiraatiijiyad muhiim u ah warshado badan maanta, laakiin